Kunyengetedza Mazano Kubva kuSemalt On Nzira Yokudzivisa Nayo Malware
Malware ndiyo inonyanya kutyisidzira kombiyuta yemushandisi. Kunze kwezvo, malware ndiyo ngozi yakajeka yekudzivisa. Kuvandudza tsika dzakanaka uye dzakachengeteka kutarisa zvinogona kudzivirira kombiyuta kubva kune malware uye zvimwe njodzi dzakadai sezvirwere. Zvinyorwa zvekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwepamusoro zvinosanganisira kudzidza kugadzirisa nekudzivirira nzvimbo dzekufungidzira.
Mutungamiriri Mukuru weVatengi Muchengetedzeri we Semalt , Jack Miller, anorondedzera munyaya imwe nzira dzinokosha dzekudzivirira malware - vps windows iix.
Chokutanga, makombiyuta ose anofanira kuchengetedzwa. Chinangwa chikuru chekuwana makombiyuta kuti kuderedze kusagadzikana kwechigadzirwa kune malware. Zvinokosha antimalware uye mapurogiramu antivirus ekuchengetedza makombiyuta zvinosanganisira Kaspersky, Norton, uye Bitdefender. Iyo software inogona kudzivirira mavharusi kubva pakupinda kombiyuta uye anogona kubvisa malware kana yaiswa. Kakawanda, zviratidzo zve malware zvinogona kunge zvisingaonekwi. Zvisinei, kugara kunowanikwa kunofanirwa kumhanyirira kuona chero mavairasi angapukunyuka asina zivo. Uyezve, iyo malware inoshandisa zvigadziriswe zvisina kukodzera mune imwe nzira yekushandisa uye imwe purogiramu. Nokudaro, danho rinokosha rekuchengetedza makombiyuta nderekuchengetedza musikana, maitiro ekushanda uye mamwe mapurogiramu akavandudzwa.
Chechipiri, vashandisi vepaIndaneti vanofanira kugara vachidzorera mafaira avo..Mamwe mapurogiramu e-malware anogona kukanganisa kana kubvisa ruzivo rwepa data rwakachengetedzwa pamakombiyuta. Uyezve, kugadzirira kuitika kwekurasikirwa kwemashoko kunodhura uye kunonyoresa kupfuura kuedza ruzivo mushure mekurwisa kwehutachiona. Nzira dzakajairika dzekusimudzira mafaira zviri muIndaneti basa rekuchengetedza uye kuikora mafaira kune imwe kunze disk.
Chechitatu, chengetedza zvigunun'una. Mishonga yakawanda inowanikwa nekutsvaga kubudiswa. Kazhinji, nzvimbo idzi dzinofungidzirwa sehutano hwechokwadi. Nokudaro, malware inogona kudziviswa nokuziva kuti mawebhusayithi anotyisidzika akafanana sei. Semuenzaniso, kutengeswa kwemasayiti kunoita sekutsvaga kana maitiro ehurongwa anonyevera inoshandiswa ne internet pane chimwe chinhu chakaipa nekombiyuta. Uyewo, zvimwe zviziviso zvinoonekwa semashoko anoratidza kuti munhu anoshandisa mubairo uye achiraira mumwe kuti azvidzore, ndeyezvipikiso zvinoshungurudza.
Pakupedzisira, vashandisi vepaIndaneti, vashanduri uye vagadziri vepanzvimbo vanofanira kudzidza kuti vangagadzirisa sei mawebhusayithi anonyorera. Kana mumwe munhu ari paIndaneti asina chokwadi kana kubudiswa kana webhusaiti yakachengeteka, peji rinofanira kuvharwa pakarepo asati adzokera peji. Saka, kana uchitarisa mawebhusayithi asingazivi, vashandisi vanofanira kunge vakangwarira. Kutanga, bvunza shamwari kana vane zviitiko newebsite kana kuti inokudzwa. Chechipiri, tarisa ruzivo rwakakosha pamusoro pewebsite. Tsvaga ruzivo pamusoro pewebsite. Tsvaga injini dzakadai seGoogle dzinofanira kushandiswa kuwana ruzivo pamusoro pekambani inotanga webhusaiti, tarisa pamusoro peongororo dzevamwe vashandisi uye zvinyorwa. Chechitatu, chengetedza mabheji emareta. Nzvimbo dzakawanda dzakaipa dzakagadzirirwa kuonekwa sehukama hwakanaka. Nzvimbo yekero inogona kushandiswa kugadzira nzvimbo chaiyo. Pakupedzisira, Google yakachengeteka tsvakurudzo yekuongorora tsvina inofanira kushandiswa pawebsite. Vashandisi veIndaneti vanofanirwa kukopa nekuisa URL yekubatanidza mubhokisi rekutsvaga panzvimbo yekuongorora uye wozotevera bhatani rekutsvaga. Mushumo wekuchengeteka unoratidzwa nehutano iyi.